Glion Institute of Higher Education na -eme emume okike Maison Décotterd
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Glion Institute of Higher Education na -eme emume okike Maison Décotterd
Ọnwa atọ ka Stéphane Décotterd sonyeere Glion Institute of Higher Education, Chef nke nwere ọtụtụ onyinye yana ụlọ akwụkwọ ụlọ ọrụ na-ahụ maka ile ọbịa na-eme mmemme okike Maison Décotterd. Maison Décotterd bụ ebe gastronomic nwere oghere atọ pụrụ iche gụnyere gastronomic Restaurant Stéphane Décotterd nwere nlele dị egwu na Ọdọ Geneva; Bistro nke Décotterd, brasserie chic; na Ogwe ezumike nke Décotterd nwere nri ụtọ ya na nhọrọ mmanya site na iko.
Ụlọ oriri na ọ outstandingụ twoụ abụọ a ma ama, nke dị na Hotel Bellevue mbụ dị na Glion, na-anabata ọhụụ onye nri nri Michelin-stéphane Décotterd nke nri mpaghara, nke ga-adigide, na nke mbụ. Banyere nkà ihe ọmụma ya, ọ na -eduzi ndị otu ya site na mmelite mgbe niile, na -eweghachi koodu nke gastronomy. Stéphane Décotterd na -ekwu, "nri m bụ mpaghara, na -adigide na nke mbụ, mana ọ na -agbanwe mgbe niile, dịka mmiri ọdọ mmiri a na -akpali m nke ukwuu."
Kemgbe 2016, Stéphane Décotterd na -agụta na brigade ya onye na -eto eto Pastry Chef Christophe Loeffel, onye meriri nturu ugo "Chef Pâtissier nke afọ 2021" site na Gault & Millau Switzerland na "Bronze Desserts 2020" na asọmpi mba France maka efere efere. Ọ sonyere na nso nso a n'asọmpi "Patissier des Jahres" na Cologne, Germany, wee gụchaa ya nke abụọ. Onye na -eto eto Pastry Chef amalitelarị mbinye aka nke ya, na -arụ ọrụ na jiometrị, udidi na ịdị mfe. “M na -agbalị mgbe niile ịgbakwunye mmetụ nke mbido ma jiri akụkọ ngwaahịa a kọọ akụkọ. Ana m etinye oke mkpa n'ịkọwapụta ọdịbendị nke m chọtara onwe m na ya, n'iji ngwaahịa mpaghara, ”Christophe Loeffel na -amalite.
N'ime ụlọ ebe a na -ere nri, Stéphanie Décotterd, onye isi Maison Décotterd na ndị otu ya na -ahụ maka ọrụ ahụ. Ọ na -enye ọrụ nwere mmegharị aka zuru oke, ebe ọ na -enwe usoro ahaziri iche, na -enye onye ọbịa ahụmịhe agaghị echefu echefu. Nraranye a maka ịdị mma na ịdị n'otu, ekwela ka Stéphanie nweta ihe nrite mbụ Michelin Switzerland maka ile ọbịa na ọrụ, na Febụwarị 2019.
Nkwa nke ịdị mma, Maison Décotterd nwere obi ụtọ isonye na Castles ọsọ agba anọ Mkpakọrịta, isonye na netwọkụ na ụlọ oriri na ọ restaurantsụ 580ụ 2014 pụrụ iche n'ụwa niile, nke ndị ọchụnta ego nọọrọ onwe ha nwere ma nwee ọmịiko maka nka ha ma na -agbasi mbọ ike iso ndị ọbịa ha nwee mmekọrịta na -adịgide adịgide. Dịka nri na amamihe Stéphane Décotterd, ndị otu Relais & Châteaux na -echebe ma na -akwalite akụ na ụba na ọdịnala nri ụwa na ile ọbịa, iji hụ na ha ga na -aga n'ihu. Ha raara onwe ha nye ichekwa ihe nketa obodo na gburugburu ebe obibi, dị ka akọwara n'ọhụụ mkpakọrịta nke ewepụtara UNESCO na Nọvemba XNUMX.
Studentsmụ akwụkwọ Glion na -erite uru dị ukwuu site na iguzobe ụlọ oriri na ọ signatureụ signatureụ abụọ na ogige Glion, na -enye ha ahụmịhe nri ọhụrụ yana ohere pụrụ iche iji mụta ihe site na nka nri pụrụ iche, na -erite uru na ọzụzụ pụrụ iche na kichin, ọrụ na ụlọ mmanya. N'otu oge, edegharịrị ogige ụlọ ọrụ Switzerland nke Glion iji nwekwuo ahụmịhe ụmụ akwụkwọ.